Fomba 10 hampitomboana ny varotra varotra namboarina amin'ny Semalt
Raha ny marina, ny mpandraharaha ara-barotra E-varotra dia manao vola beavy amin'ny vokatrao. Ny fandalinana vao haingana nataon'i Statista dia mampiseho fa ny varotra antsinjarany varotra eran-tanydia hampiakatra 2,86 tapitrisa dolara amerikana amin'ny 2018. Indrisy fa tsy manangana e-varotra fotsiny ianaomitahiry sy manantena ny mpanjifa mba handrava ny tranokalanao. Mila manomboka amin'ny fanentanana ara-barotra mahomby ianaomba hahasarika ny liana amin'ny mpanjifany.
Ny vaovao tsara dia amin'ny alalan'ireo tetik'asa ara-barotra manaporofo amin'ny alalan'ireo Semalt Digital Services ianaohampitombo ny fivarotana eCommerce - couchbase backup strategy. Ivan Konovalov, Mpanantanteraka Success Manager Semalt , manome toro-hevitra lehibeamin'ny inona ny fivarotana fivarotana eCommerce dia tokony hampiharina mba hambolena.
1. Ampiasao ny fivarotana mivangongo sy mivarotra
Ny fivarotana ary ny fivarotana amin'ny varotra dia azo antoka fa-afo izay azonao ampiasaina hampitomboana ny varotra an-tserasera. Cross-fivarotanadia ny fomba fampidirana ireo vokatra mifandraika miaraka amin'ny zavatra heverin'ny mpanjifa mividy. Manome ampanjifa be dia be ny vokatra fanampiny amin'ny safidy. Ny fivarotana dia ny fivarotana ambony kokoafamoahana vokatra iray izay mividy mpividy iray. Ity fomba amam-panao ity dia ahafahan'ny mpanjifa mahita ny vokatra mitovymiaraka amin'ny endri-javatra avo lenta sy avo lenta kokoa.
Ireo teknika momba ny varotra dia natao hamporisihana ny mpanjifa hividy vokatra hafa. Ny marina dia rehefaNy mpanjifa dia mahita bebe kokoa noho ny zavatra ilainy, dia ho voatosika hividy bebe kokoa izy ireo. Maro ny fanadihadiana naseho
Ny tanjona dia ny hamerenana ny mpanjifa mba hananganana ny mpanjifa.
2. Hanatsara ny Design Website
Amin'ny vanim-potoana nomerika amin'izao fotoana izao, mila tranokala mahazatra ianao mba hisarihana sy handraisana mpanjifa mety. nyNy fivarotana eCommerce dia ampahany amin'ny orinasa, ary ny endri-tsorany dia tokony hisaintsaina ny maha-matihanina ny marika anao.Raha ny marina, ny fanentanana fanentanana anao dia tokony hanomboka amin'ny fivarinao ihany koa. Ireo manam-pahaizana momba ny Semalta no nanambaraNy antony mahatonga ny mpanjifa matetika misoroka ny fivarotana amin'ny aterineto raha tsy misy ny fanamafisana manan-danja.
Ny fananganana fivarotana e-varotra tsara natao dia dingana manan-danja eo amin'ny fandresena ny mpifaninana. Raha ianao no izyMiomana hanavao ny fivarotana anao, ary ataovy izay hahazoana antoka fa manana endrika manintona izy, izay manome mpanjifatraikefa nahafinaritra. Raha ny marina dia hitondra haingam-pivarotana bebe kokoa ianao raha toa ka ataonao mora ho an'ny olona izanyMianara ary mahita vokatra ao amin'ny tranokala.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, maro ireo takelaka sy smartphones vaovao no tonga teo an-tsena.Nitombo be ny isan'ny mpivarotra an-tserasera. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny isan'ny mpivarotra findaydia mihoatra noho ny an'ny fampiasana Desktop. Amin'ity vanim-potoana dizitaly ity, ny fametrahana ny tsenan'ny e-commerce anao amin'ny fomba tsaraIreo fitaovana finday samihafa dia ampahany manan-danja amin'ny fahombiazan'ny orinasa.
Na Google aza dia manatsara ny fikarohana finday ho an'ny tranonkala izay mampiseho araka ny tokony ho izy amin'ny fitaovana finday.Raha hamorona tranonkala mobile amin'ny tranonkala misy anao amin'izao fotoana izao dia afaka mampiasa sehatra fiovam-pampandrosoana na findainao ianaoPlugins. Ny famoronana fifanakalozam-bola amin'ny finday elektronika dia fomba tsara azonao hampiasana ny orinasanaoho an'ireo mpivarotra finday. Rehefa manatsara ny fampakaram-bady ny fivarotana dia hampitombo ny fiovan'ny toetr'andro sy hampitombo ny fivarotana.
4. Ampiasao ny sarin'ny vokatra tsara
Aza mampiasa sary vongana fotsiny raha te hampiditra sary fotsiny. Ny sarin'ny vokatrao dia tokony hananakalitao avo. Marina fa mety ho asa mahasosotra ny fahazoana vokatra vokarin'ny vokatra, faMarina ihany koa fa azon'izy ireo atao ny manintona mpanjifa mety ho an'ny mpivarotra. Nanaporofo ny maro ny manam-pahaizanaIndraindray ny fampidirana sary mivelatra miaraka amin'ny safidy zoom-in dia mandrisika ny mpanjifa mety hividy entana.
5. Hamarino ny fanoritsoron'ny pejy
Ny famariparitan'ny pejy momba ny pejy dia manana fahafahana hamporisika ny mpanjifa mba hividy zavatra. Ataovy azo antoka izanyNosoritanao ny endri-javatra mahasoa izay mahatonga ny mpanjifa liana. Tohizo izy ireo hanohy hamporisika azy ireo bebe kokoany lakolosy. Ny tranokala eCommerce malaza tahaka an'i Amazon dia mampiseho ireo singa manan-danja amin'ny vokatra vokarina mba hanatsarana ny varotra.
Ny famariparitana dia tokony hofaritana tsara mba hamporisihana ny mpanjifa rehetra mety hamaky azy ireoto take action. Afaka mampiasa bala fandefasana tsara ianao mba hampisehoana ireo singa fototra amin'ny vokatra. Tsy isalasalanafa ianao dia ho tsy ampy amin'ny varotra maro rehefa details izay tokony hamporisika anaoNy mpanjifa mba hividianana fividianana dia miafina amin'ny famaritana.
6. Mamorona Fandefasana Vidim-Bary Videos
Fampielezan-kevitra video dia tetik'asa ara-barotra lehibe amin'ny fivarotana eCommerce maro, ampiasaina amin'nyhampitombo ny varotra. Ireo mpanjifan'ny finday ankehitriny dia aleony mijery lahatsary mihoatra noho ny karazany hafany votoatiny. Mamorona lahatsary fohy mahaliana momba ny vokatrao, dia asongadino ny zava-dehibeny endriky ny vokatra azonao entina manintona ny fijerin'ny mpanjifa. Ampidiro ao amin'ny tranonkala isan-karazany ireo lahatsary ireo.
Azonao atao ihany koa ny mampakatra lahatsary vokatra ho an'ireo horonan-tsarimihetsika malaza rehetra mba hampitomboana ny fijery. azaAlefaso ny fanatsarana ny horonan-tsary ho an'ny SEO amin'ny fampidirana ireo teny fototra amin'ny lohateny sy ny famaritana lahatsary. ianaoAfaka manampy ny adiresin'ny tranonkalanao ho lahatsoratra amin'ny famaritana ny fiara fitaterana.
7. Mamorona soso-kevitra tokana
Ny fahasamihafana goavana misy eo amin'ny sehatry ny e-varotra dia mahatonga ho sarotra ho an'ny orinasamba hialana amin'ny fifaninanana. Na inona na inona maha-tokana ny fiheveranao ny vokatraodia, mety misy mpivarotra hafa any, izay manolotra ny iray na mitovyvokatra ho an'ny tsenanareo. Raha izany no izy, inona no azonao atao mba hahatonga ny marika aminaomijanona amin'ny marika an'arivony hafa? Ny soso-kevitra miavaka iray diadia hanao ny marika manokana. Mila manoratra fomba fiasa miavaka iray manokana izay adiresy ianaony sandan'ny vokatrao. Hanome azy io izany, ho sambatra ianao amin'ny fifaninanana, ary hahazo tombontsoan'ny mpitarika.
Ny soso-kevitra miavaka iray dia azo ampidirina ao amin'ny pejin-tranonkalanao, ny pejin'ny vokatrao, ary ny dokam-barotrapejy hanatsarana ny fiovan'ny toetr'andro. Manana fahalalana izay mametraka ny marika ho an'ny hafaNy marika dia hanampy anao hanatontosa orinasa mahomby amin'ny e-varotra. Ity paikady ity dia afaka manampy anao hisintaka anao amin'ireo mpifaninana aminao.
8. Manolora fialan-tsasatra malalaka
Ity tetikady ara-barotra ity dia afaka manentana ny mpanjifa mety hividy anao ary hanatsara ny fivarotana.Ny fiverenan'ny vokatra an-tserasera dia nanampy marika maromaro eCommerce mba hahazoana mpividy ny mpanjifa ary mahatonga azy ireo vonona ny hiverina hiverina any aoriana.
Ny fiverenan'ny varotra antserasera dia mahazatra amin'ny orinasa eCommerce, ary ny mpanjifa dia hamerina ny vokatraNividy tsindraindray izy ireo. Ny mpanjifanao dia afaka manapa-kevitra ny hamerina vokatra iray izay simbana tsy nety tsara. Ny mpanjifa dia mitodika eo amin'ny iray amin'ny vokatra telo. Raha ny marina, nyNy ankamaroan'ny mpividy dia mandinika ny politikan'ny miverina alohan'ny fividianana azy.
Raha fantatry ny mpanjifa fa afaka mamerina mividy entana maimaim-poana izy ireo, dia azo inoana kokoa izanymiverena indray. Ny fikarohana nataon'ny Wall Street Journal dia nanamafy fa ny tsara indrindraNy mpanjifa dia ireo manana ny tahan'ny fiverenana ambony indrindra. Ny fampiharana ity politika ityNy fampiharana dia hanampy anao hisoroka ny fivarotana lehibe sy ny varotra fandraharahana.
9. Mampiseho ireo vokatra ao amin'ny tranonao
Ny pejy fandraisam-bahiny dia iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny tranokala eCommerce izay tokony tokonyampiasao izany mba hitazonana ny mpanjifa mifamatotra. Asehoy ny vokatra azo avy amin'ny varotra ho an'ny mpanjifa metydia afaka mahita azy ireo mazava tsara. Azo inoana kokoa fa ny mpivarotra rehetra tonga any amin'ny fivarotana e-commerceAmin'ny alàlan'ny pejy hafa dia afaka manapa-kevitra ny hitsidika ny pejy fandraisana mba hahita vokatra hafa. Koa mametraha nyNy vokatra malaza amin'ny pejy voalohany dia mampitombo ny fivarotana.
10. Hanolotra safidy famindrana vitsivitsy
Ny fanolorana mpanjifa manana safidy azo atolotra maro dia hampitombo ny varotrao. mahagaga,Fa ny orinasa mivarotra ny vokatra kalitao dia manolotra traikefa an-tserasera an-tseraseraMatetika dia tsy mahomby raha sendra. Raha toa ianao ka handrisika ny mpanjifa hividyIanao, amin'izay, vonona hanolotra safidy azo atolotra maro. Tetik'ady ara-barotra toy izanydia mora ampiasaina, fa manampy anao tsy hisarona ny mety ho mpanjifa ary avelao izy ireo mankany amin'ny mpifaninana aminao.
Hita fa nanova ny fomba fijerin'ny olona sy ny fividianany ny aterineto. Ireoandro miaraka amin'ny birao na fitaovana finday afaka mividy izay rehetra ilainao amin'ny aterineto. Olona ny olonamaniry mafy ny hiara-hiasa amin'ny orinasa eCommerce. Mba hanohy ny dingana amin'ny fiakaranany lazan'ny fivarotana an-tserasera, dia raisina an-tanan-droa ny miantso ny fanampiana matihanina avy amin'ny Semalt Digital Services .